Lemursportal: antontan-kevitra rehetra ho an’ny mpianatra | NewsMada
Lemursportal: antontan-kevitra rehetra ho an’ny mpianatra
Ny 9 hatramin’ny 12 desambra ho avy izao, hisy varavarana misokatra ho an’ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony, Ankatso, karakarain’ny Madagascar lemursportal ho fampahafantarana ireo tanora mpianatra momba ny sifaka na ny gidro eto amintsika. Miara-miasa amin’ny GERP* mandritra ny telo taona io lemursportal io hampandraisana anjara ny rehetra : fanjakana, mpianatra, mpikaroka, olon-tsotra ho fiarovana ny varika. Ho hita amin’io fotoana io ireo antontan-kevitra rehetra mahakasika ny varika, toy ny vokatry ny fikarohana, fanaraha-maso.
Zava-dehibe ny fiarovana ny ala, laboratoara manokana antoka ho fampandrosoana ny toekarena. Koa ho fantatra amin’io Madagascar lemursportal io ny tokony hatao rehetra amin’ny antsipiriany. Efa misy ny fantatra fa mbola betsaka ny hanentanana ny rehetra, tsy ho fiarovana ny varika ihany fa ny zavaboahary jiaby ao anatiny. Raha momba ny gidro, misy karazana 112 eto amintsika, 20 % tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Ireo tanora mpianatra eny amin’ny oniversite aloha izao no kendrena hahalala bebe kokoa momba izany harem-pirenena izany.
“Misy loza efa mihatra amin’ireo biby ireo raha jerena ny fahapotehan’ny ala ankehitriny. Atahorana ho lany tamingana ny gidro raha tsy handraisana fepetra haingana ny fiarovana azy any anaty ala”, hoy ny Pr Ratsimbazafy Jonah, filohan’ny GERP. Andrasan’ireo mpiara-miombon’antoka fa ny Malagasy mila mampiseho fahaiza-mitantana sy miaro ny tontolo iainana. Tsy misy afa-tsy 2 % amin’ny tetibolam-panjakana anefa ho an’ny tontolo iainana. Ho famaranana ny fotoana ny fiarahana amin’ny INTH* ho fitadiavam-bola hanapariahana ny Lemurs portal. Hita ao amin’ny www. lemursportal.org ny fanampim-baovao rehetra misy 900 fanadihadiana sy singam-baovao maherin’ny 14 000.
GERP*: Groupe d’étude et de recherche sur les primates de Madagascar.
INTH* : Institut national de tourisme et d’hôtellerie.